हाइपोथायरायडिजम र व्यायाम: कम काम थाईरोइडलाई मद्दत गर्न सक्छ? - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी कम्पनी, चेकआउट प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा घरपालुवा जनावर समुदाय औषधि जानकारी, समाचार औषधि जानकारी मनोरञ्जन समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> कम काम गरीरहेको थाँईरोइडलाई सहयोग गर्न सक्छ?
यदि तपाईंसँग हाइपोथायरायडिजम छ भने, जिममा जानु भनेको तपाईंले गर्नु भएको जस्तो पछिल्लो चीज हुन सक्छ। जब तपाईंको सानो घाँटीमा सानो पुतली आकारको ग्रन्थि खराबी छ, यो तपाईं थकित महसुस गराउँछ, संयुक्त दुखाइ पैदा गर्दछ, र आफ्नो मांसपेशिहरु लाई प्रभावित गर्दछ। यो तपाईको फिटनेस लक्ष्यहरू क्रुश गर्न ठ्याक्कै एक विधि होईन।
यी सबैमा, एक अव्यवस्थित थाइरोइडले तपाईंको शरीरको मेटाबोलिज्मलाई ढिलो बनाउँछ, यसको मतलब यो हो कि तपाईंले वजन बढाइरहनुभएको छ, तर मात्र काम गर्ने ऊर्जा छैन। संक्षेपमा: हाइपोथायरायडिजम र व्यायाम प्राकृतिक संयोजन जस्तो देखिदैन। तर, जब तपाइँको अवस्था औषधी, व्यायाम संग राम्रो संग नियन्त्रण छ सक्छ तपाईलाई राम्रो महसुस गर्न सहयोग गर्नुहोस्।
के म diclofenac सोडियम 75mg संग ibuprofen लिन सक्छु?
व्यायामले हाइपोथायरायडिजमको उपचार गर्न सक्छ?
होईन, व्यायामले तपाईंको थाइरोइडलाई बढी थाइरोइड हर्मोन उत्पादन गर्दैन, वा सर्तलाई उल्ट्याउँदैन।
एकको व्यायाम योजना वा डाईट परिवर्तन गर्दा अटोइम्यून रोगको कोर्समा कुनै असर पर्दैन, म्यारी बेलान्टोनी, एमडी भन्छिन्, जसले बाल्टिमोरको मर्सी मेडिकल सेन्टरमा एन्डोक्राइनोलॉजी, मधुमेह, र मेटाबोलिजममा विशेषज्ञ छन्। उनी आफ्ना बिरामीहरूलाई द्रुत बताउँछिन्, यदि कसैलाई थाहा छ कि के कारणले एक स्वचालित प्रतिरक्षा रोगको कारण छ वा कसरी चयन प्रतिरक्षा प्रणाली नियन्त्रण गर्ने, त्यो व्यक्तिले औषधिमा नोबेल पुरस्कार स collecting्कलन गर्ने थियो।
सम्बन्धित : हाइपोथायरायडिज्म उपचार
औषधीको साथ हाइपोथायरायडिजमको उपचार गर्दै
उचित उपचार भनेको औषधी हो जुन तपाईंको शरीरले उत्पादन गर्दैन हर्मोन प्रतिस्थापन गर्दछ।
हामी कृत्रिम थाइरोइड हार्मोन औषधिको साथ हाइपोथायरायडिजमको उपचार गर्छौं, न्यू जर्सीको रूटर्स न्यू जर्सी मेडिकल स्कूलको अन्डरोक्राइनोलजी, मधुमेह, र मेटाबोलिजमका एमडी डेभिड ब्लेच भन्छन्। यो सरल, सुरक्षित, र प्रभावी छ र सही डोज पत्ता लगाउन तपाईंले आफ्नो डाक्टरसँग काम गर्न आवश्यक छ।
राम्रोसँग उपचार गर्दा, औषधीले हाइपोथायरायडिज्मका लक्षणहरू सुधार गर्न सक्छ, निम्नमा: कम ऊर्जा, थकान, सुख्खा छाला, पातलो कपाल, तौल, बढि कोलेस्ट्रोल, डिप्रेसन वा मुड परिवर्तन, दुखाइ र जोर्नीहरूमा कठोरता, मांसपेशि कमजोरी, अनियमित वा सामान्य अवधि भन्दा भारी , बांझपन, चिसो, कब्ज, धीमा मुटुको दर, बिग्रेको मेमोरी, हार्सनेस, वा बढेको थाइरोइड ग्रंथिको प्रति बढि संवेदनशीलता।
खाना थाइरोइड औषधि संग टाढा रहन
हाइपोथायरायडिज्म भएका व्यक्तिहरू प्राय: थाइरोइड हर्मोन प्रतिस्थापन औषधिहरू आफ्नो बाँकी जीवनको लागि दैनिक लिन्छन्।खाली पेटमा गोली लिनु उत्तम हो।डा। बेलानाटोनीले खाना खानु भन्दा before० मिनेट पहिले वा चार घण्टा र कम्तिमा दुई वा चार घण्टा कुनै फलाम वा क्याल्सियम युक्त पूरकहरूको सिफारिश गर्दछ। त्यस प्रकारले तपाईको शरीरले औषधि ग्रहण गर्न अझ सक्षम हुन्छ, उनी भन्छिन्।
यो किनभने केहि खानाले तपाइँको थाइरोइड औषधि को अवशोषण मा हस्तक्षेप गर्न सक्छ। दुई व्यक्तिहरू सामान्यतया बेवास्ता गर्छन् सोया र आयोडिन युक्त खाना हुन्। एउटा अध्ययन यद्यपि, या त कुनै प्रतिकूल प्रभावहरू देखाउँदैन वा प्रभावकारितामा मात्र एकदमै सानो परिवर्तन गर्दछ।
यदि तपाइँ बिर्सनुभयो र एकै समयमा तपाइँको मेड र सप्लीमेन्ट लिनुभयो भने खराब कुनै पनि कुरा हुने छैन, डा। बेललाटोनी बताउँछन्। तर त्यस दिन तपाईं लेभोथिरोक्सिन गोलीको 60०% र ine०% बीचमा मात्र लिन सक्नुहुनेछ। यसले मानिसहरूलाई तिनीहरूको थाइरोइड औषधि लिने बावजुद कम थाइरोइडको स्तर किन हुन्छ भनेर वर्णन गर्दछ।
समाप्ति मिति पछि हात सेनिटाइजर प्रभावी छ
सम्बन्धित: थाइरोइड औषधिको साथ गडबडी गर्न सक्ने things चीजहरू
हाइपोथायरायडिज्म र व्यायाम
दैनिक औषधि तपाईको थाइरोइडको स्तर सामान्यमा फर्काउने एक मात्र तरीका हो। यद्यपि, व्यायामले हाइपोथायरायडिज्मका लागि लाभदायक प्रभाव पार्न सक्छ - र केहि लक्षणहरूको नकारात्मक प्रभावहरूसँग लड्न मद्दत गर्दछ जस्तै वजन, डिप्रेशन, कठोरता, जोड़को दुखाइ, र मांसपेशि कमजोरी।
हाइपोथायरायडिजमको लागि गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाइँको डाक्टरसँग अनुगमन गर्नु र तपाइँ थाइरोइड औषधिको सही डोजमा राख्नु भएको कुरा निश्चित गर्नु, तर तपाइँको कामहरूको सूचीको अर्को चरण व्यायाम हुनुपर्छ। यास्मीन अखुनजी, MD , Paloma स्वास्थ्य संग एक थाइरोइड विशेषज्ञ। हाइपोथायराइड लक्षणहरू प्रबन्ध गर्न नियमित व्यायाम महत्त्वपूर्ण भूमिका हो।
जब तपाईं एक अनावृत थाईरोइड छ, एक व्यायाम तालिका प्रतिबद्ध गर्न मद्दत गर्न सक्दछ:
१. ऊर्जा स्तर सुधार्नुहोस्।
हाइपोथायरायडिज्मको बारेमा मानिसहरूले देख्ने पहिलो लक्षणहरूमा थकान वा कम ऊर्जा हो। अवस्थाले तपाईंलाई अल्छी महसुस गराउन सक्छ। औषधीले यसलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, केही अनुसन्धान कम प्रभाव व्यायाम थकान कम गर्न सक्छ भनेर देखाउँदछ। केवल यकिन गर्नुहोस् कि आफुलाई धेरै कडा धकेल्दैन। यो ढिलो सुरू गर्न महत्त्वपूर्ण छ, र बिस्तारै तपाईंको गतिविधि स्तर बढाउनुहोस् ताकि तपाईं यसलाई अधिक गर्नुहुन्न र थकित हुन सक्नुहुन्न।
२. अतिरिक्त पाउन्ड गुमाउनुहोस्।
वजन कम कम थाइरोइडको दुर्भाग्यपूर्ण साइड इफेक्ट हो। यसले तपाईंको शरीरको मेटाबोलिज्मलाई ढिला बनाउँदछ, जसले वजन कम गर्न गाह्रो बनाउँछ — तपाईं ठीक खाए पनि। व्यायामले क्यालोरीलाई जलाउँदछ र वजनलाई सुधार गर्न सक्दछ जसले अल्छी चयापचयहरूलाई रोक्न सक्छ, डा। अखुन्जी भन्छन्।
Muscle. मांसपेशि द्रव्यमान बनाउनुहोस्।
हाइपोथायरायडिज्मले मांसपेशीहरू बिगार्न सक्छ, र मांसपेशियों को ऐंठन वा कमजोरीको कारण। जब तपाईं आफ्नो अवस्था नियन्त्रणमा पाउनुभयो, यो समय उनीहरूलाई पुन: निर्माण गर्ने समय हो - शक्ति प्रशिक्षणको साथ। वजन उठाउँदा वा प्रतिरोधको रूपमा तपाईंको शरीरको वजन प्रयोग गर्दा तपाईंको शरीरलाई सुदृढ बनाउँछ। यसले तपाईंलाई मांसपेशि द्रव्यमान निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। मांसपेशीले बोसो भन्दा बढी क्यालोरीहरू जलाउँछ, र यो फाइदा आरामको बखत पनि जारी रहन्छ, डा। अखुन्जी भन्छन्। यसले वजन घटाउन पनि मद्दत गर्दछ।
Joint. जोड़को दुखाइ हल्का गर्नुहोस्।
जोड़को दुखाइ हाइपोथायरायडिज्मको दुर्भाग्यपूर्ण साइड इफेक्ट हो। कम प्रभाव व्यायाम, जस्तै पौडी खेल्न, ताई ची, वा योग, कि पीडादायी भावना कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। जब तपाईं व्यायामको साथ मांसपेशि निर्माण गर्नुहुन्छ, यसले तपाईंको जोर्नीहरूमा केही तनाव हटाउँछ, आन्दोलन कम पीडादायी बनाउँछ।
Depression. डिप्रेसनका लक्षणहरूलाई कम गर्नुहोस्।
डिप्रेसन हाइपोथायरायडिज्मको साथसाथै जान सक्दछ। व्यायाम कम मुडको लागि एक प्राकृतिक उपचार हो। अध्ययन देखाउनुहोस् कि मध्यम तीव्रता एरोबिक व्यायामको minutes 45 मिनेट, हप्तामा तीन पटक मुडमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ। कसरतले तपाईंको शरीरको एन्डोरफिनको रिलीजलाई पनि बढाउँदछ, जुन मुडलाई बढाउनको लागि परिचित छ, भन्छडा। अखुनजी।
एक पटक तपाईंको अवस्था नियन्त्रणमा आयो (औषधि सहित), तपाईंसँग एक कसरत प्रणाली सामना गर्न बढी ऊर्जा हुनेछ।
एकै समयमा चिसो र एलर्जी औषधि
कस्तो प्रकारको व्यायाम उत्तम हुन्छ?
तपाईंले रमाईलो गर्नुभएको गतिविधि छनौट गर्नुहोस्। यसले हिड्न, पैदल यात्रा, दौड, पौंडी, वा जिममा कसरत गरेर समावेश गर्न सक्छ। कम प्रभाव एरोबिक्स व्यायाम र बल तालिमको एक प्रोग्राम सम्भवतः हाइपोथायरायडिजमको लागि उत्तम प्रकारको व्यायाम हो, वर्णन गर्दछडा। अखुनजी।कम प्रभाव एरोबिक्सले तपाईंको जोर्नीहरूमा धेरै मेहनत नगरीकन मुटुको दर बढाउन सक्छ। एक असाध्यै बाइक, अण्डाकार मेसिन, वा हिंड्नु पनि कार्डियो वर्कआउट्सको लागि उत्तम विकल्प हो। योग र पाइलेट्सले कोर मांसपेशीहरूको शक्ति सुधार गर्न र केही पछाडि र हिप दुखाइ कम गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंको फिटनेस योजनामा ​​हप्तामा तीन पटक times० देखि minutes० मिनेट टाँस्न प्रयास गर्नुहोस्, र त्यसलाई स्वस्थ खानाको साथ जोड्नुहोस्। जहिले पनि म बिस्तारै बिस्तारै सुरूवात गर्ने र तपाईंको प्रगति गर्दै जाने सल्लाह दिन्छु — जहिले पनि तपाईंको लागि सुरक्षित छ भनेर डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्, भन्छन्डा। अखुनजी।याद गर्नुहोस्, यदि तपाईं आफैंलाई चाँडै चोटपटक लाग्नुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो तालिकामा अडिग रहनुहुनेछ। प्रगति हो, पूर्णता होइन।
व्यायामले तपाईंको थाइरोइड परिवर्तन गर्दैन। यद्यपि नियमित फिटनेस प्रोग्रामको साथ तपाईसँग बढी उर्जा, बढी फुर्सद, र खुशीको हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ।
Metformin 500 mg र metformin hcl 500 mg बीच के फरक छ?
ब्रोंकाइटिस को लागी सबै भन्दा राम्रो खाँसी को औषधि हो
कसरी भियग्रा को लागी एक डाक्टर सोध्न
सेरोटोनिन सिन्ड्रोम को लक्षण के हो?
के तपाइँ tylenol र ibuprofen सँगै लिन सक्नुहुन्छ
एप्पल साइडर सिरका पिउनु स्वास्थ्य को लागी के गर्छ?